कात्तिक अन्तिमसम्म समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छः राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ । पार्टीकै कतिपय नेता यसलाई अप्रासंगिक भन्न थालेका छन् ।यस्तो बेला राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य एवं सोही पार्टीको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक रहेका राजेन्द्र महतोको भनाइ के छ ?लगायतराजनीतिक विषयमा शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानीः
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीचको एकताका प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ ?
हामी सही दिशामै गइरहेका छौं । धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ । केही विषय बाँकी छन् । बाँकी रहेका विषयलाई पनि सल्टाउने अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौं ।
तपाईं एकीकरणको कुरा गरिरहनुभएको छ, तपाईंकै पार्टीका केही नेता अब एकता हुँदैन भनिरहेका छन्, यो के भएको ?
कसले के भनिरहेको छ, त्यसमा लाग्नुको औचित्य छैन । दुवैपार्टीको आधिकारिक व्यक्तिले नकारात्मक कुरागरेका छैनन् । यो सत्यलाई सबैले बुझ्नुपर्छ । दुवै पार्टीकाशीर्ष नेताहरू एकताका लागि आशावादी छौं । काम पनि धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यसकारण अब यो एकता हुन्छ ।वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नैपर्छ । कमजोर तागतले केही हुँदैन । संख्या बढाउनै पर्छ । त्यसैले एकता अपरिहार्य पनि छ ।
अहिलेसम्म कुनकुन विषयमा कुरा मिलेको छ ?
वरिष्ठ पदका लागि हाम्रा वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई राख्ने सहमति भएको छ । उहाँलेपनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । राजपा र समाजवादी मिलाएर नामकरण गर्ने, झण्डा र चुनाव चिन्हमध्ये दुवै पार्टीले एक/एकवटा राख्ने भन्नेजस्ता विषयमा कुरा मिलिसकेको छ । योबाहेकका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । नेताहरूको व्यवस्थापन अलि समस्या बनेको छ ।यसमा हामी सबैले त्याग देखाउनुपर्छ ।
समाजवादी पार्टी सरकारमा छ, तपाईहरू सरकारमा प्रत्येक्ष सामेल हुनुभएको छैन, यसले समस्या पार्दैन ?
समाजवादी पार्टीकुनै हालतमा यो सरकारमा अब बस्छ जस्तो लाग्दैन । कात्तिक ३० गतेसम्म सरकारबाट उहाँहरू हट्नुहुन्छ । त्यसपछि एकीकरणमा थप सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
यसको खास केही संकेत मिलेको छ र ?
तपाईंहरूले संकेत नदेखेर हुँदैन । पत्रकारसँग सोधेर कोहीसरकारमा जाने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्ने हुँदैन । हट्नेबेलामा पत्रकारदेखि सबैलाई थाहा हुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ठग्ने कार्यमा मात्रै लागिरहेको उपेन्द्र यादवजीले बुझिसकेका छन् । पहिला गरिएका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ ।
समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेन भने ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। काल्पनिक विषयमा कुरा नगरौं । यदि यस्तो भयो भने एकता हुँदैन । तर, यसको कुनै सम्भावना छैन ।
रौतहटमा भएको नरसंहारमा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्ने चर्चा चलिरहेको छ, दुई पार्टीबीचको एकताको समयमा आएको यो चर्चाले के संकेत गर्छ ?
नेताहरूलाई फसाउने काम हुन्छ । त्यसबाट तर्सिन हुँदैन । राजनीति नै जालझेल जस्तो बन्दैछ । दुलोभित्र पसेर केही हुँदैन । डटेर मुकाबिला गर्नुपर्छ ।
उपेन्द्र यादवलाई रौतहट ‘केस’मा पक्राउ गरियो भने ?
केही हुँदैन । जनताले सबै कुरो बुझिरहेका छन् । आन्दोलनमा भएको घटनालाई लिएर कसैलाई दुःख दिन मिल्दैन । लहरो तान्दा पहरो जाने भनेझैं १७ हजार मानिस पनि मरेका छन् । त्यसमापनि कारबाही हुनुपर्छ ।
एकताकै कुरा गर्दा राजपा एकताको विषय पनि अझै सकिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् नि ?
एकताको सिद्धान्तविपरीत राजपा बनेको कुरोलाई म स्वीकार गर्छु । एकतामा शक्तिको हिसाब महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यहाँ पार्टीको नाउँ हिसाबले मिलाइयो ।तरपनि हामी पार्टीभन्दा यसलाई आन्दोलन बुझिरहेका छौं । पार्टी एकतापछि महाधिवेशन भएको भए आज यो स्थिति हुने थिएन । सुरूमा एकवर्षमा अधिवेशन गर्ने कुरो भयो, फेरि अर्को वर्ष । यसरी हामीले टार्दै गयौं । अब एकतासँगै बाँकी रहेका सबै काम हुन्छन् ।
राजपा र समाजवादीबीचको एकता किन अपरिहार्य भयो ?
हामीले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छौं । पार्टी एकीकरण भएर हामी बलियो हुन सकेनौं भने यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । मधेशी जनताले गरेको यत्रो त्याग र सहादत त्यसै खेर जान्छ । नश्लीय चिन्तन भएकाहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउने हिम्मत देखाउँदैनन् । अब मधेशी, जनजाति, थारू, मुस्लिम सबैलाई लिएर एउटा सशक्त पार्टी बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले मेहनत गर्यौं भने १० सिट जति बढ्न सक्ने अवस्था म देख्छु । यस्तै, स्थिति समाजवादी पार्टीसँग पनि छ । हामी दुवैपार्टी र केही एकीकरण भएर आएकाअन्य साना दललाई पनि मिलाइयो भने यो स्थिति रहँदैन । हामी धेरै बलियो हुन्छौं ।
संघीय सरकारसँग तपाईंहरूको अहिले कस्तो सम्बन्ध छ ?
हामीबीच जुन प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो, त्यो छैन । केपी ओली सरकार बनाउँदा हामीले समर्थन गरेका थियौं । तर, संविधान संशोधनमा ठग्ने काम भयो । रेशम चौधरीको रिहाइको सवालमा सरकार मौन रह्यो । यस्तो परिवेशमा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुने भन्ने हुँदैन । अहिले नेपाली कांग्रेसले होइन, हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।
पार्टीसँग जस्तो सम्बन्ध भएपनि तपाईं र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच राम्रो सम्बन्ध छ भनिन्छ, तपाईंका नजिकका सांसद प्रमोद साहलाई जनकपुर विमानस्थल तोडफोड प्रकरणमा छुटाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहयोग गरेको पनि भनिन्छ नि ?
म पार्टीको प्रतिवद्ध कार्यकर्ता हुँ । पार्टीलाई खराब गरेर व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउन सक्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीको राम्रो अनुहारले म प्रभावित हुन सक्दिनँ । मैले उहाँलाई व्यक्तिगत र सार्वजनिक रूपमा भन्ने कुरा के हो भने संविधान संशोधन गर्नुस् । यो संविधानको कारणबाट पेलाइमा परेका पक्षको संरक्षणको व्यवस्था गर्नुस् । मधेशी, मुस्लिम, जनजाति, थारूलगायतले उठाएको विषय समाधान गर्नुस् । यति गर्न सक्नुभयो भने हामी तपाईंलाई सम्मान गर्छौं।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १०, २०७६, १३:३७:००